iPod Touch na iPad Mini, iza no hividy? | Vaovao IPhone
Apple dia nanolotra ny iPod Touch 6G vaovao azy miaraka amin'ny herin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, fakan-tsary faran'izay tsara ary loko maro loko izay mifanaraka amin'ny tsiro rehetra, manomboka amin'ny mahazatra indrindra ka hatramin'ny maoderina indrindra. Ity fitaovana kely nefa matanjaka ity dia mety hanadino ny varotra mahantra amin'ny iPad, indrindra ny iPad Mini, izay taorinan'ny "fanavaozana" farany dia nihemotra izy io raha ny fahitana azy sy ny pitsipitsony. Mividy iPad Mini na iPod Touch? Raha manana fisalasalana ianao dia mety hanampy anao hanapa-kevitra io fampitahana io.
1 Fanjakan'ny mpanera zavakanto
2 Fakan-tsary 8MP
3 Fampisehoana retina
4 Karama Apple Pay
5 Ny tsy fitoviana hafa koa dia tokony horaisina
Fanjakan'ny mpanera zavakanto
Ny iPod Touch 6G dia mizara processeur amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, antoka fa tsy ho olana ny herinaratra mandritra ny taona maro amin'ny fanavaozana ny iOS sy ny fampiharana Izy io koa dia manana ny coprocessor mihetsika M8 toy ireo zokiny lehibe, iPhones farany. Amin'ny lafiny iray, ny iPad Mini Retina 2 dia navela tamina processeur taloha, mitovy amin'ny iPad Mini Retina tany am-boalohany, ny A7 amin'ny iPhone 5s. Midika izany fa tsy hanana olana amin'ny fampisehoana ianao anio, na amin'ny taona ho avy, saingy mazava fa hijaly vetivety ny fampisehoana noho ny amin'ny iPod Touch.
Ny fakantsary dia iray amin'ireo fananana lehibe an'ny iPod Touch vaovao. Miaraka amin'ny 8 Mpx misy azy, tsy isalasalana fa nihoarany ny fakantsary 5 Mpx an'ny iPad Mini Retina 2, izay koa tsy afaka maka sary vaky na mirakitra horonantsary miadana miakatra hatramin'ny 120 fps. Aza adino fa ny iPod koa dia manana flash, izay tsy mahafinaritra, fa afaka manampy anao amin'ny toe-javatra sasany.
Mazava ho azy fa iray amin'ireo fahasamihafana fototra dia ny haben'ny efijery roa. Na dia manana efijery 2-inch aza ny iPad Mini Retina 7,9, ny iPod Touch kosa dia avela 4-inch, saika ny antsasaky ny takelaka Apple. Amin'ny lafiny kalitaon'ny efijery dia tsy misy fahasamihafana: samy Retina IPS miaraka amin'ny 326 dpi. Mbola mandeha lavitra ve io fahasamihafana io? Tsia ny valiny. Ho fanampin'ny maha lehibe kokoa anao dia tsy hahita tombony hafa ianao, satria ny iPad Mini dia tsy mankafy ny tena multitasking eo amin'ny efijery izay ataon'ny iPad Air 2. Nefa manizingizina aho fa: raha ny habeny no zava-dehibe aminao dia mazava ny valiny.
Karama Apple Pay
Ny fitaovana roa dia tsy azo ampiasaina hividianana fivarotana ara-batana, na amin'ny Apple Watch, satria tsy mifanaraka amin'ny Apple Watch izy roa ireo. Fa amin'ny tranga iPad Mini Retina 2, azonao atao ny mampiasa Apple Pay hividy amin'ny rindranasa izay mifanaraka, noho ny sensor ID Touch, izay tsy ananan'ny iPod Touch 6G.
Ny tsy fitoviana hafa koa dia tokony horaisina
Misy toetra hafa tokony horaisinao rehefa manapa-kevitra amin'ny iray na amin'ny iray hafa ianao. IPad dia manana safidy amin'ny fampiasana karatra SIM afaka mifandray amin'ny Internet raha tsy misy tamba-jotra WiFi misy, zavatra tsy azo atao amin'ny iPod Touch izay hiankina amin'ny WiFi foana hiditra amin'ny Internet.
Ny habe mety ho tombony rehefa mijery sarimihetsika amin'ny iPad Mini dia mety hanjary fatiantoka raha ny amin'ny tombana ny fahafaha-mivoaka, arysatria lehibe kokoa sy mavesatra kokoa ny takelaka (331 grama amin'ny iPad Mini amin'ny 88 grama an'ny iPod touch)
Tombony lehibe amin'ny iPod Touch ny vidiny. Na dia mijery ny maodely mora kokoa an'ny iPad Mini (16GB) aza, tsy misy fifandraisana 4G, dia saika eo amin'ny ambaratongan'ny maodely 128GB an'ny iPod Touch, ary lafo kokoa noho ny 64GB. Ny maodely fototra indrindra amin'ny iPad Mini Retina 2 dia 70% lafo kokoa noho ilay maodely fototra indrindra amin'ny iPod Touch 6G, ary na eo aza ity farany izay manana specs ambonimbony amin'ny lafiny rehetra. Manamarina izany fahasamihafana izany ve ny habeny? Miankina amin'izay tadiavin'ny mpividy tsirairay izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPod Touch na iPad Mini, iza no hividy?
avoahy, manindrona dia hoy izy:
Toa hadalana amiko raha te hampitahanao ny IPod Touch amin'ny ipad mini ianao, inona no mitranga fa tsy manana lohahevitra hafa horesahina intsony ianao ary apetrakao io famenoana io?
Samy hafa ny fitaovana roa, na ny fikirakirana ny IOS aza, na dia amin'ny lafiny sasany aza dia toa mitovy. Amin'ny lafiny iray, milaza ianao fa ny IPod dia manana heriny mitovy amin'ny iPhone 6 sy 6 plus, ary ho lany andro izy io aorianan'ny Ipad Mini, fa izay tsy azo ampitahaina ary tsy hanaisotra. ny ipad mini, ny haben'ny efijery ary noho izany ny traikefan'ny mpampiasa.
Manana ny iPhone 6 aho, manana Ipad Mini Retina sy Ipad Air koa aho, raha tsy any an-trano aho raha tsy misy Ipad, miaraka amin'ny iPhone tantanako, fa araka ny nolazaiko, mitantana aho, etsy ankilany miaraka amin'ny Ipad mini Tiako ny mijery fahitalavitra, sarimihetsika, andian-tantara ary lalao misy fantsona hafa, miaraka amin'ny traikefan'ny mpampiasa tena hafa, mankafy efijery tsara sy fiainana bateria mahafinaritra aho.
Toa hitako fa mampifangaro Churras sy Merinas ny lahatsoratrao.
Mamaly hamoaka azy io
Niatrika an'ity olana ity aho ary nanapa-kevitra ny hividy ipod touch 5g satria mora kokoa noho ny ipad izy io ary koa ambany dia ambany ny vahaolana. Zatra fampisehoana retina eo imasoko aho ary rehefa naka ny ipad mini aho dia nandiso fanantenana (farafaharatsiny momba ny lohahevitra famahana) satria hita daholo ireo piksela.
Ho fanampin'ity ampahany ara-teknika ity dia nandinika lafiny hafa koa aho. Manoro hevitra an'ity lahatsoratra ity aho:
Mamaly an'i clara
Apple namoaka doka iPhone vaovao mitondra ny lohateny hoe "Apps mahatalanjona"
Repositories Cydia folo tokony hanandrana amin'ny iOS 8.4